Golaha Shacabka oo ansixiyay sharciyadda Sharciga Maareeynta-Maaliyadda-Guud iyo Sharciga Shirkadaha – Kalfadhi
in Aragti, Baarlamaanka, Hindise-Sharciyeedyo, Warar
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel-mariyay Sharciga Maareeynta maaliyadda guud PFM-ka iyo Sharciga shirkadaha.
Kulanka guud ee Mudanayaasha Golaha Shacabka oo ku furmay 156-Xildhibaan, waxaa ugu horeyn Xoghayaha guddiga Maaliyadda, Miisaaniyadda, Qorsheynta iyo la xisaabtanka Hay’adaha Dowladda ee Golaha Shacabka Xildhibaan Aadan Cali Xasan uu Golaha u Akhriyay meelaha wax ka bedelka lagu sameeyay ee Sharciga Maareeynta maaliyadda guud PFM-ka.
Intaasi ka dib Xildhibaanadda Golaha oo u codeeyay Sharcigan ayaa waxaa codka haa ku ogolaatay 148-Xildhibaan 6-Xildhibaan ayaa diiday halka 2-Xildhibaanna ay ka aamustay sida uu natiijada ku dhowaaqay Guddoomiyaha Golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka shir guddoominayay.
Wasiirka wasaaradda Maaliyadda Dr Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo Guddoomiye kuxigeenka guddiga Maaliyadda, Miisaaniyadda, Qorsheynta iyo la xisaabtanka Hay’adaha Dowladda ee Golaha Shacabka Xildhibaan Aamina Cusmaan ayaa xildhibaanadda uga mahad celiyay sida ay sharcigan u ansixiyeen.
Dhinaca kale, xildhibaanadda golaha shacabka ayaa u codeeyay Sharciga shirkadaha oo goluhu horey u ansixiyay islamarkaana uu dib usoo celiyay golaha Aqalka Sare, waxaana ogolaatay 156-Xildhibaan oo ah tirada guud ee Xildhibaanadda kulanka joogay.
Wasiirka Ganacsiga iyo warshadaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan iyo Guddiga ganacsiga, warshadaha iyo hor-umarinta dhaqaallaha ee Golaha Shacabka ayaa sidoo kale Xildhibaanadda uga mahad celiyay sida ay ugu codeeyeen sharcigan.
Guddoomiye kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay Labada Aqal ee Baarlamaanka Dalka aanan dhankooda siyaasadeyn shuruucda Dalka Muhiimka u ah gaar ahaan kuwa kaabaya qorshaha deyn cafinta Dalka maadaamaa ay dalka muhiim u yihiin.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxaan, oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in maadaama waqtiga uu aad u yaryahay looga baahanyahay Guddiga diyaarinta sharciga Doorashooyinka Qaranka in ay xooga saaraan ka hor dhamaadka bishan December in sharcigan la ansixiyo, sidoo kalena codeynta sharcigan ay si wadajir ah ugu codeyn doonaan labada Aqal ee Baarlamaanka dalka.
Goorma ayaa la filayaa in la ansixiyo sharciga doorashooyinka Qaranka?